WARBIXIN BUUXDA: Qaabkii ay Kenya uqabatay Hogaamiye katirsan Kooxda Daacish & Magaciisa | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home English News WARBIXIN BUUXDA: Qaabkii ay Kenya uqabatay Hogaamiye katirsan Kooxda Daacish & Magaciisa
WARBIXIN BUUXDA: Qaabkii ay Kenya uqabatay Hogaamiye katirsan Kooxda Daacish & Magaciisa
Booliiska Kenya ayaa xiray nin lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay dowladda Khilaafadda Islaamka laga magac baxday ama Daacish, kaasi oo ku jiray liiska dad aad loo doon doonayay.
Ninkaan ayaa lagu eedeeyay in dagaalyahano cusub uuka caawiyay inuu u diro Somalia iyo Libya, sida booliiska ay sheegeen.
Ali Hussein Ali, oo lagu naaneeyso (mid la aaminay iyo laba kale oo la soctay ayaa lagasoo qabtay magaala xeebeedka Malindi.
Warsaxaafadeed boolisku soo saaray ayaa lagu sheegay in Cali uu gacan kageystay u qoritaanka xubno cusub ururka Daacish ee kadagaalama wadanka Liibiya, isla markaana uu xiriir lalahaa kooxaha dadka tahriibiya iyo sidoo kale ururka al-Shabaab. Warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu lacago ukala gudbin jiray kooxaha jihaad doonka ah ee kusugan geeska Afrika.
Afhayeenka booliiska Kenya George Kinoti ayaa sheegay in Ali uu xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada ah ee ISIS iyo Al-Shabaab,waxaana lala xariiriyay shabakadda dadka tahriibisa ee Magafe ee Libya.
Eedeeysanaha waxaa lala qabtay laba kale oo lagu kala magacaabo Ibrahim Abasheikh Mukhtar iyo Abdi Mohamed Yusuf aka Dader oo ay kuwada sugnaayeen Malindi intii lagu guda jiray howlgal si wadajir ah ay u fuliyeen laamaha ammaanka 27 March 2017″ ayuu yiri Kinoti.
Sida lagasoo xigtay booliiska Ali ayaa ku dhashay magaalada Muqdisho waxa uu Kenya tagay sanadkii 2010 isagoo ku mar marsiyoonaya inuu yahay dalxiise kadib waxa uu aaday South Afrika,iyo Sudan waxa uuna safarkiisa ugu dambeeyn ku dhammaaday Tripoli, Libya, meeshaas oo laga qoray si uu ugu biiro ISIS.
Kinoti waxa uu intaas ku daray in Ali uu si qarsoodi ah dib ugu soo galay Kenya sanadkii lasoo dhaafay halkaas oo wakiil muhiim ah uu uga noqday ISIS iyo shabakadda dadka tahriibisa ee Magafe.
“Ali ayaa ku caan ah magaca mid la ‘aaminay waxa uu kaalin weyn ka ciyaaray fududeeynta safarka xubnaha cusub ee ISIS ee kabaxaya Somalia iyo Kenya si ay ugu biiraan ISIS-ta Libya” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Kinoti.
“Waqtiga la xirayay,Ali waxa uu lacag dhan 639,000 oo dollarka Mareykanka ah, oo u dhiganta 64 milyan oo lacagta Kenya ah ka dalbanayay hogaamiyayaasha ISIS” ayuu yiri Kinoti.
Lacagta ayaa la sheegay inay ahayd mid lagu shaqaaleeysiyay in la siiyo marka xubnaha cusub ee Daacish si nabad ah ugu tagaan ISIS-ta Libya.
Baarayaasha ayaa sheegay in Ali ninka la socday ee Mukhtar uu yahay ninka iskaleh guriga ay dagaan xubnaha cusub ee la qoray ee kuyaala Islii iyo Malindi ka hor inta aanan loo fududeeyn safarkooda Libya iyagoo sii maraya, Kampala, una maraya dhinaca xuduudka Busia, intaa kadib loo gudbiyo Jubba Koofurta Sudan kadib ay sidaa ku tagaan Libya.
“ Mukhtar waa milkiilaha dhul ku yaala Watamu waana fududeeyaha ISIS, waxa uu gurigiisa u isticmaalaa oo uu ku caawiyaa argagixisada iyo xubnaha cusub ee sugaya in loo tahriibiyo Libya” ayuu yiri Afhayeenka Booliiska Kenya Kinoti.
Laamaha ammaanka ayaa la socda in ku dhawaad 10 qooys ay aragagixisada si xoog ah ku weeydiisatay lacag madax furasho ah.
Kinoti ayaa sheegay in qaar kamid ah xubnaha la qortay oo waalidiintooda lacag ay bixiyeen la dilay, kuwaas oo uu ula jeedo dhalinta Kenyanka ah ee gacanta ugu jira Magafe.
Previous articleShirkii Jaamacadda Carabta oo Soomaaliya lagu bah-dilay [Akhriso Qodobkii Soomaaliya]
Next articleXOG : Wasiir ka socda DF oo Ku sugan Hargeysa & Madaxda S/Land oo wadahadal kula jira